Ukuqhuma kweVolcano eHawaii Ukudala uMgangatho woMoya oPhantsi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Ukuqhuma kweVolcano eHawaii Ukudala uMgangatho woMoya oPhantsi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuqhuma kwentaba-mlilo yaseHawaii kwenza i-vog
Abahlali baseHawaii kunye nabakhenkethi bayacetyiswa ukuba bazilungiselele kwaye bazi malunga neemeko ezingqongileyo, nendlela abavakalelwa ngayo okanye abanokuthi basabele ngayo kwivog - volcanic smog - emoyeni ovela kwiSiqithi esikhulu saseHawaii.
Ngenxa yoqhushumbo oluqale izolo ukusukela eHalema'uma'u crater kwindibano ye Kīlauea Volcano, iimeko ze vog kunye ne sulphur dioxide (SO₂) amanqanaba omoya ayanda kwaye ayaguquguquka.
Umsebenzi oqhubayo ungaphakathi kweHawai'i Volcanoes National Park, nangona kunjalo, ukutshintsha kwemeko zomoya kudale iingxaki zomgangatho womoya kwintshona yengqungquthela.
Iindawo ezichaphazelekayo zibandakanya iPahala, iNā'ālehu, i-Ocean View, iHilo kunye ne-East Hawai'i.
Umgangatho womoya ombi kunye namanqanaba anyukayo e-SO₂ ukusukela ukuqala kogqabhuko-dubulo kunokubangela iingxaki kwimpilo yokuphefumla, ngakumbi kubantu abanovakalelo. Iimeko ziguquka ngokukhawuleza, kwaye umgangatho ompofu womoya obangela iziphumo zempilo unokuhlala kakhulu.
Kwimeko yeemeko ezinqabileyo, kucetyiswa la manyathelo alandelayo okhuseleko:
Ukunciphisa izinto zangaphandle ezibangela ukuphefumla okunzima. Ukuphepha imisebenzi yangaphandle kunye nokuzilolonga ngexesha leemeko kunokunciphisa ukubekeka engozini kunye nokunciphisa umngcipheko kwimpilo. Oku kubaluleke ngakumbi kumaqela abuthathaka anje ngabantwana, abantu abadala, kunye nabantu abaneempawu zokuphefumla esele zikhona kubandakanya i-asthma, i-bronchitis, i-emphysema, kunye nesifo esingapheliyo semiphunga nesentliziyo.
Hlalani ngaphakathi nize nivale iifestile neengcango. Ukuba kusetyenziswa isixhobo sokupholisa umoya, setha ukuba siphindaphinde.
Ukuba ufuna ukuphuma kwindawo enefuthe, vula isixhobo somoya kwaye usete ukuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde njalo, ukuba ufuna ukungahambelani nendawo enefuthe, vula isixhobo somoya kwaye usete kwakhona.
Soloko ugcina amayeza ezandleni kwaye ufumaneka ngokulula.
Amayeza amiselweyo emihla ngemihla kwizigulo zokuphefumla kufuneka athathwe kwishedyuli kwaye anokubonelela ngokhuseleko kwiziphumo zesulfure dioxide.
Khumbula ukuba ukugquma ubuso kunye neemaski ezisetyenziselwa ukuthintela ukusasazeka kwe-COVID-19 aziboneleli ngokhuseleko kwi-SO₂ okanye kwi-vog.
Nxibelelana nogqirha ngokukhawuleza xa kukho iingxaki zempilo.
Musa ukutshaya kwaye uphephe umsi womntu otshayayo.
Sela iziselo ezininzi ukuthintela ukoma.
Zilungiselele kwaye zilungile izicwangciso zosapho olungxamisekileyo.
Thobela izilumkiso ezenziwa ngamagosa olawulo lolawulo olungxamisekileyo.
Abandwendweli iHawai'i Volcanoes National Park kufuneka baqaphele ukuba amatye aqhushumbe kunye noqhushumbo lunokuvelisa uthuthu olwenziwe ziiglasi zentaba-mlilo kunye namaqhekeza amatye. Ezi ndawo zitshisayo okwangoku zimele ingozi encinci, kodwa uthuli lothuli kwiindawo ezingqonge ingqungquthela yaseKīlauea zinokwenzeka.
ISebe lezeMpilo laseHawaii (i-DOH) likhuthaza abahlali kunye nabatyeleli ukuba basebenzise ezi zixhobo zilandelayo zibonelela ngolwazi olupheleleyo, olucacileyo nolukhoyo ngoku kwiziphumo zempilo ye-vog, indlela yokuzikhusela, ukuqikelela kunye nokuqikelelwa komoya, umgangatho womoya, ukutshintsha kweemeko , kunye neengcebiso kubakhenkethi:
IHawaiʻi Interagency Vog Information Dashboard Olona lwazi lubanzi nolusexesheni kwi-intanethi kwi-vog nakwi-SO₂ evela kwimisebenzi yentaba-mlilo.
ISebe loMoya ococekileyo le-DOH igcina uthungelwano lwexesha elisondele-lokwenyani lokujonga imeko yomgangatho wobume bomoya obhaqa i-SO₂ kunye nomba wezinto.
I-United States Geological Society (USGS) Uhlaziyo lweKīlauea Volcano.
Inkonzo yeePaki zeSizwe ulwazi malunga nokutyelela ngokukhuselekileyo iPaki yeSizwe yaseHawaii.
Isikhokelo se-DOH kwixesha elifutshane Amanqanaba okuCebisa.